ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အသည်း ပျက်စီး နေပြီ ဆိုတာ ပြသနေ တဲ့ လက္ခဏာ (၇)မျိုး – Zartiman
ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အသည်း ပျက်စီး နေပြီ ဆိုတာ ပြသနေ တဲ့ လက္ခဏာ (၇)မျိုး
Zar Ti Man | September 9, 2020 | Knowledge | No Comments
(၁) မျက်လုံးနဲ့အသားအရောင် ဝါလာခြင်း အသားအရေနဲ့ မျက်လုံးတွေ ဝါနေတယ်ဆိုရင် အသည်းက ပြဿနာ တစ်ခုခုဖြစ်နေပါပြီ။ တ ကယ်လို့ တံတွေးတွေကပါ ဝါကျင်ကျင် အ ရောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းသွားပြသင့်တဲ့ အခြေအနေဖြစ် နေပါ ပြီ။ (၂) ဝမ်းဗိုက်အလွန် ဖောင်းလာခြင်းဝမ်းဗိုက်နေရာက အမြဲလိုလို ဖောင်းနေတယ်၊ နေရထိုင်ရတာလည်း သက်တောင့် သက်သာမရှိဘူး၊ အမြဲလိုလို ပြည့်အင့်တဲ့ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်နေတယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်လို့ ထင်ရလောက်အောင် ဝမ်းဗိုက်က ဖောင်းနေ တယ် ဆိုရင်လည်း အသည်းကြောင့် ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။အသည်းက သူ့ဆီ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အရည်တွေကို ကောင်းကောင်း မစစ်ထုတ်နိုင်တဲ့အခါ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေဆီ အရည် တွေရောက်လာပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတာပါ။ အသည်းမကောင်းတဲ့အခါ ဝမ်းဗိုက်အပြင် ခြေထောက်နဲ့ ခြေကျင်းဝတ်တွေပါ ရောင် ရမ်းတတ်ပါတယ်။
(၃) ကိုယ်အလေးချိန်ရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်း ဝမ်းဗိုက်က ပြည့်အင့်နေသလိုခံစားချက်မျိုးအမြဲဖြစ်နေပြီး အစားစားချင် စိတ်လည်း မရှိ တာမျိုး၊ အစားစားလိုက်တာနဲ့ ဗိုက်အောင့်တာမျိုး တွေဖြစ်နေတော့ ပုံမှန်မစားသောက်ဖြစ်တော့ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းလာပါ တယ်။ဘာမှမစားထားဘဲ အချိန်တိုင်းပြည့်အင့်နေပြီး အ စားစားချင်စိတ် မရှိတာမျိုး၊ ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာကျဆင်းလာ တာ မျိုးတွေဖြစ်လာရင် ဆေးစစ်သင့်ပါတယ်။(၄) အရေပြားပေါ်မှာ သွေးကြောပြတ်ရာတွေ ပေါ်လာခြင်း အသည်းမကောင်းတဲ့အခါ အရေ ပြားအောက်မှာ ကပ်ရက်ရှိနေတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောမျှင်လေးတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်တာကြောင့် အရေပြား ပေါ်မှာ သွေးကြောပြတ်ရာလေး တွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ရင်ဘတ်၊ လက်၊ လည်ပင်း နဲ့ မျက်နှာတွေမှာ သွေးကြောပြတ်ရာတွေ တွေ့လာ ရင် အသည်းရောဂါရှိ/မရှိ အမြန်စစ်ဆေးပါ။
(၅) သွေးခြေဥလွယ်ခြင်း အသည်းမှာ ပြဿနာတစ်ခုခု ရှိတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပရိုတင်းထောက်ပံ့မှု နည်းသွား ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ သွေး ကြောမျှင်လေးတွေမှာ သွေးခဲခြင်းဖြစ်လာပြီး အတွင်းပိုင်းမှာ သွေးယိုစိမ့်မှုတွေဖြစ်လွယ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ တစ်ခုခုနဲ့ ထိခိုက်မိတာနဲ့ သွေးခြေဥသွားပြီး လွယ်လွယ် နဲ့ မပျောက်တော့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။(၆) ဆီးအရောင်အရမ်းရင့် လာခြင်း လူတစ်ယောက်ထဲမှာတောင် ဆီးအရောင်က အမြဲတမ်းတော့ တူမနေနိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အရောင်တွေကွဲပြားနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းလိုလို ရှိသင့်တဲ့ အရောင်ထက် ရင့်တဲ့အရောင်ဖြစ်နေတာမျိုး၊တခါတလေ အညိုရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် နဲ့ အဝါရောင်ရင့် ရင့်တွေဖြစ်လာရင်တော့ အသည်းမှာ Bilirubin လို ခေါ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အရမ်းပိုလျှံနေတာကြောင့်လို့ ပြောရမှာပါ။
(၇) အရေပြားပေါ်မှာ ပုံမှန်ထက်ယားယံခြင်း ရေချိုးဆပ်ပြာနဲ့ မတည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရေပြားခြောက်သွေ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ယားယံ တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမျိုးက ပုံမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် ညအိပ်တဲ့အခါ တစ်ကိုယ်လုံး မခံမရပ်နိုင်အောင် ယားတာမျိုး၊ အစားအစာတွေ တော် တော် များများနဲ့ ဓာတ်မတည့်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေ ကြုံလာရင်တော့ အသည်းမကောင်းတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အသည်းဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ မှာ အလုပ်တွေ အများဆုံးလုပ်ရတဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသည်းမှာ ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်ရင် လူကို အချိန်တိုအတွင်း သေဆုံးစေတဲ့ အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အသည်းပျက်စီးလာတဲ့အခါ စောစောသိရင် ကုသဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သိတာနောက် ကျခဲ့ရင်တော့ ကုသဖို့ မလွယ် တော့ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အသည်း မပျက်စီးခင်မှာ ကုသနိုင်အောင် အသည်းမှာ ရောဂါ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကြုံရ တတ်တဲ့ ရှေ့ ပြေးလက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) မကျြလုံးနဲ့အသားအရောငျ ဝါလာခွငျး အသားအရနေဲ့ မကျြလုံးတှေ ဝါနတေယျဆိုရငျ အသညျးက ပွဿနာ တဈခုခုဖွဈနပေါပွီ။ တ ကယျလို့ တံတှေးတှကေပါ ဝါကငျြကငျြ အ ရောငျပွောငျးလာပွီဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ ခကျြခငျြးသှားပွသငျ့တဲ့ အခွအေနဖွေဈ နပေါ ပွီ။ (၂) ဝမျးဗိုကျအလှနျ ဖောငျးလာခွငျးဝမျးဗိုကျနရောက အမွဲလိုလို ဖောငျးနတေယျ၊ နရေထိုငျရတာလညျး သကျတောငျ့ သကျသာမရှိဘူး၊ အမွဲလိုလို ပွညျ့အငျ့တဲ့ခံစားခကျြမြိုး ဖွဈနတေယျ၊ ကိုယျဝနျဆောငျတဈယောကျလို့ ထငျရလောကျအောငျ ဝမျးဗိုကျက ဖောငျးနေ တယျ ဆိုရငျလညျး အသညျးကွောငျ့ ဖွဈနိုငျ ပါတယျ။အသညျးက သူ့ဆီ ဝငျရောကျလာတဲ့ အရညျတှကေို ကောငျးကောငျး မစဈထုတျနိုငျတဲ့အခါ တခွားအစိတျအပိုငျးတှဆေီ အရညျ တှရေောကျလာပွီး ရောငျရမျးခွငျးကိုဖွဈစတောပါ။ အသညျးမကောငျးတဲ့အခါ ဝမျးဗိုကျအပွငျ ခွထေောကျနဲ့ ခွကေငျြးဝတျတှပေါ ရောငျ ရမျးတတျပါတယျ။
(၃) ကိုယျအလေးခြိနျရုတျတရကျကဆြငျးခွငျး ဝမျးဗိုကျက ပွညျ့အငျ့နသေလိုခံစားခကျြမြိုးအမွဲဖွဈနပွေီး အစားစားခငျြ စိတျလညျး မရှိ တာမြိုး၊ အစားစားလိုကျတာနဲ့ ဗိုကျအောငျ့တာမြိုး တှဖွေဈနတေော့ ပုံမှနျမစားသောကျဖွဈတော့ဘဲ ကိုယျအလေးခြိနျ ကဆြငျးလာပါ တယျ။ဘာမှမစားထားဘဲ အခြိနျတိုငျးပွညျ့အငျ့နပွေီး အ စားစားခငျြစိတျ မရှိတာမြိုး၊ ကိုယျအလေးခြိနျ သိသိသာသာကဆြငျးလာ တာ မြိုးတှဖွေဈလာရငျ ဆေးစဈသငျ့ပါတယျ။(၄) အရပွေားပျေါမှာ သှေးကွောပွတျရာတှေ ပျေါလာခွငျး အသညျးမကောငျးတဲ့အခါ အရေ ပွားအောကျမှာ ကပျရကျရှိနတေဲ့ သှေးလှတျကွောမြှငျလေးတှကေို ပကျြစီးစနေိုငျတာကွောငျ့ အရပွေား ပျေါမှာ သှေးကွောပွတျရာလေး တှေ ပျေါလာတတျပါတယျ။ရငျဘတျ၊ လကျ၊ လညျပငျး နဲ့ မကျြနှာတှမှော သှေးကွောပွတျရာတှေ တှလေ့ာ ရငျ အသညျးရောဂါရှိ/မရှိ အမွနျစဈဆေးပါ။
(၅) သှေးခွဥေလှယျခွငျး အသညျးမှာ ပွဿနာတဈခုခု ရှိတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျရဲ့တခွားအစိတျအပိုငျးတှကေို ပရိုတငျးထောကျပံ့မှု နညျးသှား ပါတယျ။ အဲ့ဒီအခါ သှေး ကွောမြှငျလေးတှမှော သှေးခဲခွငျးဖွဈလာပွီး အတှငျးပိုငျးမှာ သှေးယိုစိမျ့မှုတှဖွေဈလှယျစပေါတယျ။အဲ့ဒီတော့ တဈခုခုနဲ့ ထိခိုကျမိတာနဲ့ သှေးခွဥေသှားပွီး လှယျလှယျ နဲ့ မပြောကျတော့တာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။(၆) ဆီးအရောငျအရမျးရငျ့ လာခွငျး လူတဈယောကျထဲမှာတောငျ ဆီးအရောငျက အမွဲတမျးတော့ တူမနနေိုငျပါဘူး။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အရောငျတှကှေဲပွားနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ အမွဲတမျးလိုလို ရှိသငျ့တဲ့ အရောငျထကျ ရငျ့တဲ့အရောငျဖွဈနတောမြိုး၊တခါတလေ အညိုရောငျ၊ လိမ်မျောရောငျ နဲ့ အဝါရောငျရငျ့ ရငျ့တှဖွေဈလာရငျတော့ အသညျးမှာ Bilirubin လို ချေါတဲ့ ပစ်စညျးတှေ အရမျးပိုလြှံနတောကွောငျ့လို့ ပွောရမှာပါ။
(၇) အရပွေားပျေါမှာ ပုံမှနျထကျယားယံခွငျး ရခြေိုးဆပျပွာနဲ့ မတညျ့လို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ အရပွေားခွောကျသှတေ့ာကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ ယားယံ တတျပါတယျ။ အဲ့ဒါမြိုးက ပုံမှနျပါ။ ဒါပမေယျ့ ညအိပျတဲ့အခါ တဈကိုယျလုံး မခံမရပျနိုငျအောငျ ယားတာမြိုး၊ အစားအစာတှေ တျော တျော မြားမြားနဲ့ ဓာတျမတညျ့ဖွဈလာတာမြိုးတှေ ကွုံလာရငျတော့ အသညျးမကောငျးတာကွောငျ့ဖွဈနိုငျပါတယျ။အသညျးဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျထဲ မှာ အလုပျတှေ အမြားဆုံးလုပျရတဲ့ ကိုယျတှငျးအင်ျဂါတဈခုဖွဈပွီး အသညျးမှာ ရောဂါတဈခုခုဖွဈရငျ လူကို အခြိနျတိုအတှငျး သဆေုံးစတေဲ့ အထိ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။အသညျးပကျြစီးလာတဲ့အခါ စောစောသိရငျ ကုသဖို့ဖွဈနိုငျပမေယျ့ သိတာနောကျ ကခြဲ့ရငျတော့ ကုသဖို့ မလှယျ တော့ပါဘူး။ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အရမျးအရေးကွီးတဲ့ အသညျး မပကျြစီးခငျမှာ ကုသနိုငျအောငျ အသညျးမှာ ရောဂါ တဈခုခုဖွဈရငျ ကွုံရ တတျတဲ့ ရှေ့ ပွေးလက်ခဏာတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါကြီး ကမ္ဘာပေါ် မှာ ဖြစ်လာ မယ် လို့ ကြိုတင်နိမိတ်ဖတ် ခဲ့သူများ၏ ပြောဆိုချက်များ
ဖူးစငုံစ အခူး ခံ ရ လျှင် ငယ်ငယ် ရွယ် ရွယ် အိမ်ထောင်ပြု လျှင် ဒီလိုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်
မိခင်အပေါ် ဆက်ဆံပုံကိုကြည့်ပြီး မင်္ဂလာဦးည ၌ပင် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း၏ အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ တင်တွေ ရင် တွေ ကြည့်ပြီး ဒါဟာ အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေသူတစ်ချို့ ဖတ်ဖို့
သီချင်းမြူးမြူးလေးနဲ့ စည်းချက်ကျကျ ကနေ တဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ
ရင်ခုန်စရာ ကကွက်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ခေးဆက်သွင်
ဆက်ဆီမော်ဒယ် ဖြစ်တိုင်း ခေါ်အိပ်လို့မရပါဘူးလို့ ဒဲ့ဒိုးကြီးပြောလိုက်တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနု
အသည်းယားစရာကောင်းအောင် အမိုက်စားပို့စ်တွေပေးနေတဲ့ လုလုအောင်